Madaxweyne Xasan Sheekh oo ballan-qaad u sameeyay labadii gabdhood ee lagu dhibaateeyay Galdogob – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ballan-qaad u sameeyay labadii gabdhood ee lagu dhibaateeyay Galdogob
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeeysay ka hadlay falkii kufsiga iyo jirdilka isku jiray oo degmada Galdogob ee gobolka Mudug loogu geeystay gabdho Soomaaliyeed.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu dhaleeceeyay falkii xumaa ee dhawaan degmada Galdogob loogu geystay labo gabdhood, taas oo lagu tilmaamay mid laga argagax leh.
“Aad iyo aad ayey ii xanuun-jisay falkii kufsiga iyo jirdilka ahaa ee ka dhacay degmada Goldogob, waxaan ku dhiira-gelinayaa dowlad goboleedka Puntland in sharciga la marsiiyo kuwii ka dambeeyey kufsiga gabadhaas.” Sidaasi waxaa war-saxaafadeedka ku yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa culumaa’udiinka iyo isimada Puntland la wadaagay mowqifka ay dowladda federaalka Soomaaliya ka taagan tahay falkaasi xanuunka badan.
“Dowladda federaalka Soomaaliya dulqaad uma laha kufsiga iyo cabsi gelinta dumarka oo ah sharafta ummadda Soomaaliyeed” Ayuu madaxweyne Xasan Sheekh ku yiri war-saxaafadeedka.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa labada gabdhood ee la xanuunsan kufsiga iyo jirdilka loo geeystay u ballan-qaaday in gargaar caafimaad oo deg-deg ah gudaha iyo dibadaba loogu sameeyn doonno.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay aheyd markii 6 wiil oo dhalinyaro ah ay degmada Galdogob kufsi iyo jirdil ugu geysteen labo gabdhood oo Soomaaliyeed, iyadoona illaa iyo haatan gacanta lagu dhigay 5 ka mid ah wiilaashaas, halka midkii lixaad uu weli baxsad yahay.